Fananan-trano hofaina any Karachi, Sindh
Real Estate Listings: » All Others Real Estate » All Others Real Estate » PK » Sindh » Karachi » Fananan-trano hofaina any Karachi, Sindh1
DHA Defense dia manolotra tontolo milamina sy fampiononana, inona koa no mbola tadiavinao? Trano malalaka amin'ny DHA Defense dia sarotra ny mahazo azy, ka alao haingana ny fanapahan-kevitrao. Afaka mahita karazana fananana amidy na hofaina ao amin'ny DHA Phase 5 ianao, ka ataovy izay hifindranao anio. Ny vidin'ny PKR Rs 275,000 ho an'ity fananana ity dia be dia be, ary tsy tokony hohadinoina. Tapitra ny fikarohana nataonao momba ny fananana 500 metatra toradroa! Mandehana amin'ity lisitra ity. Ny singa iray manofa ao amin'ny toerana be mpampiasa dia manome ihany koa ny fotoana hiaina ny fiainanao tsara indrindra. Ny antsipiriany lehibe momba ny trano dia voatanisa etsy ambany. Ny efitrano fisakafoana malalaka dia ny zava-drehetra hampiantrano sakafo hariva mahaliana ary miaraka amin'ity iray ity, azonao atao koa izany. Ny serivisy fitantanana fanariana fako dia miantoka ny fahadiovan'ny toerana. Ity efitrano fanaovana sary ity dia toerana mety indrindra hampiantranoana sakafo hariva sy fety ara-dalàna. Na inona na inona fangatahanao momba ny fanananao, mifandraisa aminay mba hahitana ny valiny tsara indrindra.
Karachi (Urdu: کراچی; Sindhi: ڪراچي; ALA-LC: Karācī, IPA: [kəˈraːtʃi] (mihaino) dia renivohitry ny faritany Pakistaney Sindh. Io no tanàna lehibe indrindra ao Pakistan, ary tanàna lehibe fito lehibe indrindra eto an-tany. Voatondro ho tanàna maneran-tany beta, foibe ara-indostrialy sy ara-bola ao Pakistan, ary ny tombony GDP 164 miliara dolara (PPP) hatramin'ny taona 2019. Io koa no haben'ny kolontsaina, fanabeazana ary politika. Karachi dia tanànan'ny cosmopolitan any Pakistan, izay tanàna lehibe indrindra amin'ny fiteny sy fiteny ary be dia be ary ara-pinoana, ary koa iray amin'ireo tanànan'ny liberaly sy ara-tsosialy any Pakistan. Miaraka amin'ny toerana misy azy eo amin'ny Ranomasina Arabo, Karachi dia toerana fitaterana fitaterana entana, ary fonenan'ny seranan-tsambo roa lehibe indrindra any Pakistan, ny Port of Karachi sy Port Bin Qasim, ary koa ny seranam-piaramanidina be mpitia ao Pakistan, ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena ao Jinnah. Na dia nonenana nandritra ny millennia aza ny faritra Karachi, dia natsangana ho tanàna mimanda ao Kolachi ny tanàna tamin'ny 1729. Tena nitombo tokoa ny fananganana tamin'ny alalàn'ny orinasa British East India tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19. Nanomboka ny asa lehibe ny Anglisy mba hanova ny tanàna ho seranan-tsambo lehibe, ary nampifandray azy ireo tamin'ny tamba-jotra malalaka misy azy. Tamin'ny fotoana nisarahan'ny fizarainan'i India Indonezia dia ilay tanàna lehibe indrindra tao Sindh izay mitentina 400.000 eo ho eo. Taorian'ny fahaleovantenan'i Pakistan dia nitombo fatratra ny mponina ao an-tanàna noho ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana silamo anjatony maro avy tany India. Nahazo fitomboana ara-toekarena haingana ny tanàna taorian'ny fahaleovan-tena, ka nahasarika ireo mpifindra monina avy nanerana an'i Pakistan sy Azia Atsimo. Ny isam-pon’i Karachi dia voaisa 14,9 tapitrisa tamin’ny fanisam-bahoaka tamin’ny taona 2017. Karachi dia iray amin'ireo tanàna mitombo haingana indrindra erak'izao tontolo izao, ary manana vondrom-piarahamonina izay misolo ny foko rehetra ao Pakistan. Karachi dia fonenan'ny mpifindra monina Bangladeshi 2 tapitrisa mahery, mpitsoa-ponenana Afghan 1 tapitrisa, ary Rohingyas 400.000 avy ao Myanmar.Karachi no foiben'ny indostrialy sy ara-bola any Pakistan ankehitriny. Ny toekarena dia manana toekarena ofisialy ho tombanana eo amin'ny 164 miliara amin'ny taona 2019 izay lehibe indrindra ao Pakistan. Karachi dia nanangona ny ampahatelon'ny vola hetra tany Pakistan, ary niteraka 20% an'ny harinkarena an'ny Pakistan. Manodidina ny 30% ny vokatra indostrialy Pakistaney dia avy ao Karachi, raha ny seranan-tsambo an'i Karachi dia manodidina ny 95% amin'ny varotra any ivelany Pakistaney. Manodidina ny 90% eo amin'ireo orinasam-pirenena miasa any Pakistan no mitambatra ao Karachi. Karachi dia raisina ho renivohitry ny lamaody any Pakistan, ary nampiantrano ny Karachi Fashion Week isan-taona nanomboka tamin'ny 2009.Known ho "City of Lights" tamin'ny taona 1960 sy 1970 noho ny fiainam-panahiny mavitrika, i Karachi dia nofatoran'ny foko, sekta ary ny fifanolanana politika. tamin'ny taona 1980 niaraka tamin'ny nahatongavan'ilay fitaovam-piadiana nandritra ny Ady Sovietika - Afghanistan. Ilay tanàna dia nanjary fanta-daza noho ny habetsaky ny herisetra mahery vaika, saingy nihena ny heloka bevava taorian'izay hetsika famoretana nanoherana ny mpanao heloka bevava, ny antoko politika MQM, ary ireo milisy Islamista natomboka tamin'ny 2013 nataon'ny Pakistan Rangers. Vokatry ny fandidiana dia nandeha avy amin'ny laharana faha-6 mampidi-doza indrindra manerantany noho ny heloka bevava tamin'ny taona 2014 i Karachi, tamin'ny taona 9320 tamin'ny voalohan'ny taona 2020.
150,000 PKR / Isam-bolana
120,000 PKR / Isam-bolana
44,000 PKR / Isam-bolana
115,000 PKR / Isam-bolana
250,000 PKR / Isam-bolana